Ny antony dia noho ny fandefasana anjomara vao maraim-be (6 ora 20mn) teny Ampefiloha nataona fiara Toyota Land cruiser V8 takelaka mena mitondra ny laharana 8900 WWT izay voamarina fa ampiasaina tale iray eo anivon’ity minisitera ity. Navoakan’ireo nahita avy hatrany tany anaty tambajotran-tserasera ary niteraka resabe omaly tontolo andro ity tranga iray ity. Voalazan’ny fanambaran’ny minisitry ny fahasalamana fa efa nampanantsoina nangatahana fanampim-panazavana ary avy eo nangalana fepetra mifandraika amin’ny zavatra tsy mety nataony sady mbola narahana sazy fampitandremana ity tale ity. Nanampy izay dia nanao fanekena an-tsoratra ingahy tale fa tsy hamerina intsony. Hentitra tokoa ny fandaminana napetraky ny praiminisitra Ntsay Christian vantany vao tonga teny Mahazoarivo izy fa tsy misy manampahefana afaka manao hitsin-dalana sy mampaneno kiririoka na kipantsona na anjomara eny an-dalambe fa manaja ny fandaminan’ny fifamoivoizana, afa-tsy ireo filohana andrim-panjakana ihany. Anatra ho an’ny hafa iny.